Iyunithi Yasebhishi Yesimanje Enokupaka | Ukulala 3 - I-Airbnb
Iyunithi Yasebhishi Yesimanje Enokupaka | Ukulala 3
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Eleni-Maria
U-Eleni-Maria Ungumbungazi ovelele
1 Iyunithi yesimanjemanje yesitayela esiphansi se-BDR eBurleigh Beach Esplanade. Vuka ngokubhukuda kwasekuseni noma uhambehamba ngezinyawo ogwini lolwandle olumangalisayo lwe-Burleigh, jabulela ukudla kwasekuseni noma ikhofi ekhefi eliqhele ngamamitha nje futhi ungene esiphuzweni sasemini nesekushona kwelanga eBurleigh Pavilions edumile 3 imiz. Ilungele imibhangqwana, imindeni emincane, abahambi bebhizinisi noma abangashadile. I-Burleigh yilapho umlingo wenzeka khona, futhi lena enye yezindawo ezihamba phambili ze-Gold Coasts zokudlela, ukuthenga nokuzwa leyo vibe yeholide ekhululekile.
- Hamba phezulu efulethini
- Ikhefi ngaphambili kwesakhiwo
- Ukupaka Kwamahhala Esizeni
- Ilondolo eyabiwe
- Ihlanzwe ngokochwepheshe ngaphambi kwesivakashi ngasinye
- Ilineni lelineni elibalwa ngentambo elisezingeni eliphezulu lehhotela kanye namathawula
- Ilineni eliyisipele uma kwenzeka
- Ukungena kalula ngebhokisi lokukhiya
- Ikhishi elifakwe ngokugcwele
- Igumbi lelanga elivalekile elinombhede owodwa ogqokiswe okombhede wosuku
- I-Lounge suite
- I-TV yesihenqo esiyisicaba esijwayelekile
- Umbhede owodwa/umbhede wosuku wesivakashi esengeziwe
- Ikhishi elijwayelekile, elihlome ngokuphelele
- Amapuleti nezinto zokusika
IGUMBI 1: Umbhede wendlovukazi
- Ishawa ye-en-suite nendawo yokugezela
"I-Burleigh Heads, noma i-Burleigh nje kubantu bendawo, ihlezi njengekhefana elipholile phakathi kwe-Surfers Paradise enyakatho ne-Coolangatta eningizimu. Iwuphawu oluhle lokubhala olugudle i-Gold Coast futhi impela kwenye indawo lapho ungama khona.
Ake siqale ngolwandle, olujabulela ukuthandwa okukabili nalabo abathanda ukubhukuda emanzini avikelekile kanye nalabo abathanda ukuntweza bezungeza inhloko-dolobha. Ngosuku lapho kungase kube nzima khona kuyo yonke indawo oGwini, ungabheja idola lakho eliphansi kunekhona elivikelekile e-Burleigh ongacwilisa kulo. Ngisho nabanikazi bezindlu abaqinile bazoyithanda le ndawo yokuya e-Burleigh Heads National Park egoqa isihloko njengesikhafu semfashini, enikeza imibono yolwandle kwesokunxele kanye nenani lezindlela zokuhamba nezilwane zasendle ongazizwa.
I-Foreshore yase-Burleigh iyikhaya lezihlahla zikaphayini ezinephunga elimnandi ezibonakala ngasogwini futhi kule ndawo eyipaki kunezindawo eziningi zokwenza ipikiniki noma izoso. Lena futhi indawo efanelekile yezimakethe ezijwayelekile zobuciko nemisebenzi yezandla, lapho uzulazula khona futhi udla ukudla ogwini lwangaphambili kanye nesikhuthazo solwandle esimemeza ngemuva. Indawo yokudlela eseduze nolwandle ikhona lapha lapho ungafunga ukuthi izinhlanzi ezisepuletini lakho zigxume ziphuma emanzini, futhi kukhona isiko elikhulayo lekhefi elijabulisayo kulezi zingxenye. Abaqambi abasha nabo sebeqala ukugqamisa izindawo zokuthenga futhi i-amble lapha ngeke idumaze.
Hamba phakathi nezwe uye eNtshonalanga Burleigh lapho ipaki yezimboni enkulu iqukethe izinto ezinhle zokuthenga nendawo yokudlela emnandi. Mhlawumbe ukhefana waleli phuzu lolwandle kufanele kube uphawu lokubabaza.”
- Indawo oya kuyo eGold Coast
Ungakwazi ukufinyelela mina noma elinye lethimba lami lokungisekela nge-Airbnb
UEleni-Maria Ungumbungazi ovelele